बाँकेबाट आयो दु:खद खबर: बिबाह भएको ६ महिना मै स्वस्तिकाको रहस्यमय निधन! – NepalajaMedia
March 6, 2021 193
श्रीमानले नै ह’त्या गरेको भन्दै माईती पक्षद्वारा कार’वाहीको माग । दोसि लाई कार्बाही को दायराम लेउनको लागि सक्दो सेयर गरौं जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा आज तनाव भएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ भृकुटिनगर निवासी स्वस्तिका लिम्वुको मृ’त्युको बिषयलाई लिएर त’åनाव भएको हो । लिम्वु हिंजो घरमा झुण्डिएको अवस्थामा मृ’त फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
राँझामा रहेका माइती पक्षले स्वस्तिकाको हत्या भएको भन्दै कार’वा’हीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरीमा आएर प्रर्दशन गरिरहेका छन् । करिव दुईसय बढीको मासले प्रर्दशन जारी राख्दा तनाव भएको हो ।
स्वस्तिकाको ६ महिना अघि भृकुटीनगरका आशिष बुढाक्षेत्रीसँग विवाह भएको थियो । माइती पक्षले श्रीमानले नै स्वस्तिकाको ह‘त्या गरेको भन्दै कारवाहीको माग राखेर प्रर्दशन गरेका हुन् । श्रीमानले पटकपटक स्वस्तिकालाई कुटपिट गर्ने गरेको माइती पक्षको भनाइ छ ।
नयाँ बर्षको दिन विहान छोरीले माइत आउछु भनेको र मध्यान्ह श्रीमानले आउन दिएनन आउन पाउदीन भनेर फोन गरेको आमाले बताउनुभयो । त्यसपछि छोरीको मोवाइल अफ भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
छोरीले आ’त्मह‘त्या नगरेको दावी गर्दै उहाँले ह‘त्या भएको आरोप लगाउनुभएको छ । पीडितहरुले प्रहरी प्रशासनले दोषीलाई उम्काउन खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् । तर बाँकेका एसपी अरुण पौडेलले आशिषलाई प‘क्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
Prevसधै हासेर लोकदोहोरि गाउने कल्पना दाहाल आज एकाएक रुदैरुदै आइन मिडियामा, आखिर किन यतिसम्म भयो त ? (भिडियो)
Nextश्रीमान विदेशमा, घरमा श्रीमती गर्भवती छु भन्छिन्: ‘सपनामा आउने गर्थे श्रीमान्